Auckland, New Zealand oo ku taal Qufulka Diyaaradda: Diyaaradda ayaa heegan gelisay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Auckland, New Zealand oo ku taal Qufulka Diyaaradda: Diyaaradda ayaa heegan gelisay
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
New Zealand waxay ahayd halbeegga caalamiga ah ee lagula dagaallamayo COVID-19 - waddankuna markale ayuu sameynayaa
New Zealand wax fursad ah uma qaadaneyso inay ku casuunto dalkeeda COVID-19
Xiritaanka ayaa lagu dhawaaqay hal tijaabo oo wanaagsan oo qoys ah
Shirkadaha dayuuradaha ayaa la ogeysiiyay tan iyo markii qofka jiran uu u shaqeynayay LSG Skychef
Auckland, New Zealand waxay ku jirtaa quful
Raiisel wasaaraha Jacinda Ardern ayaa amar ku bixisay in la xiro sedexda maalmood Auckland ka dib markii lamaane iyo gabadhooda laga helay tijaabo caafimaad wadankan si weyn loogu amaanay baabi'inta faafitaanka cudurka.
Kiisaska cusub ee bulshada ayaa kaliya afar ka dhigaya seddexdii bilood ee la soo dhaafay - iyadoo xiritaanka uu ahaa kii ugu horreeyay ee New Zealand muddo lix bilood ah.
"Hore ayaan u tirtirnay fayraska mar labaadna waan sameyn doonaa," ayuu Ardern ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay caasimada, Wellington.
Xaddidaadda heerka 3 waxay u baahan tahay qof walba inuu guriga joogo mooyee marka laga reebo dukaameysiga muhiimka ah iyo shaqada muhiimka ah. Waxay sidoo kale qasbi doontaa dib u dhac ku yimaada dib u habeynta Koobka Ameerika.
"Saddex maalmood waa inay na siisaa waqti ku filan oo aan ku soo ururinno macluumaad dheeri ah, oo aan u qaadno tijaabooyin ballaaran oo aan ku ogaanno haddii ay jirto baahin ballaaran oo bulshada ah," ayuu yiri Ardern. "Taasi waa waxa aan aaminsanahay in habka taxaddarku u baahan yahay waana waxa saxda ah in la sameeyo."
Shirkadaha diyaaradaha ayaa heegan la galiyay maxaa yeelay haweeneyda reerka uu cudurka ku dhacay waxay u shaqeysaa shirkad diyaaradeed oo cuntada siisa, LSG Sky Chefs, halkaasoo ay inta badan ka shaqeyso goobaha dharka lagu dhaqdo, saraakiisha ayaa sidaas sheegay. Ma aysan raacin diyaaradaha.
Qoyskeeda oo aan la aqoonsan ayaa ahaa markii ugu horeysay ee la xaqiijiyo infekshinka tan iyo markii socdaal ka soo laabtay Yurub laga helay 24-kii Janaayo, kaasoo ahaa kiiskii ugu horreeyay muddo labo bilood ah.
New Zealand, oo ay ku nool yihiin 5 milyan, ayaa lagu soo warramey wadar ahaan in ka yar 2,330 xaaladood iyo 25 dhimasho tan iyo markii uu cudurku bilaabmay.